Yila i-imeyile eFowuni-eNohlobo | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 18, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 UAdam Omncinci
Zonke iintsingiselo ze-Intanethi zikhomba ekukhuleni okukhulu ekubeni zingaphi ii-imeyile ezifundwayo kwizixhobo zefowuni. Ezinye izibalo zibonise ukuba i-40% yazo zonke ii-imeyile zenkampani zifundwa kwifowuni ephathekayo. Kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo, ukufunda i-imeyile kwisixhobo esiphathwayo kunyuke nge-150%! Ukujonga ii-imeyile kwiscreen esincinci kunzima kunye nezibonelelo. Ezinye izixhobo zixhasa i-HTML, eminye imifanekiso yokulayisha ngokungagqibekanga, eminye inombhalo wokujonga kwangaphambili okhoyo ngaphambi kokuvula i-imeyile, ezinye ziya kulinganisa ngokuzenzekelayo ububanzi be-imeyile, kwaye uninzi luya kulinganisa iifonti ukuze zifundeke.
Litmus ibonelele ngale infographic inolwazi ngendlela yokwenza ulwenziwo lwe-imeyile yesixhobo esiphathwayo. I-infographic icacisa izinto ezibalulekileyo ekudaleni uyilo olusebenzayo kunye nemingxunya echaphazela ukusebenza. Njengokuba sisondela kwixesha leeholide, kubalulekile ukuqaphela xa abathengisi bethumela ii-imeyile… uninzi lwababhalisi luya kubafunda njengoko bathenga! Ngaba baya kuba nakho ukufunda eyakho?
Impembelelo yokusiNgqongileyo yeSSPAM
Juni 9, 2012 ngo-2: 52 PM
Oku kwenziwe kakuhle, ndiyiprintile kwaye ndinayo kwidesika yam kwaye ndibhekisa kuyo rhoqo. Ndiyabulela kakhulu ngokuvelisa le nto.
Juni 9, 2012 ngo-3: 38 PM
Abantu abakhulu http://www.litmus.com lifanelwe udumo, uNorma!